China pp hollow sheet landy mihodina milina pad mpanamboatra sy mpamatsy | Sihai
Pp mitafo fanitso dia be mpampiasa amin'ny fonosana landy, fitehirizana, fandefasana, trano fitehirizana. Ny ravina mihosona pp ho an'ny landy vita amin'ny landy dia namboarina natao, lamba firakotra ho an'ny silksins misaraka sy miaro.
Ny fonosana fonosana pp hollow ho an'ny landy dia namboarina natao ho sosona roa pp hollow sheet riveting miaraka, ny sosona pad dia be lavaka ao amin'ny takelaka roa sosona, ny lafiny iray dia lavaka lehibe, ny lafiny iray hafa dia lavaka kely hametahana ireo milina rehefa mihorona paleta, tsara ho an'ny raikitra ny fihodinana ary miaro ny fihodinana amin'ny fandefasana. Raha ny mahazatra, ny velaran-tany misy sosona dia 4-6mm matevina pp misy vatosoa vita amin'ny birao namboarina natao, azo atao matanjaka be izy io ary koa pirinty logo manokana.
Ny landy miloko sosona pad dia vita amin'ny pp hollow, manana lanja maivana izy, tsy tantera-drano, mateza, matanjaka, matevina mitovy, malefaka ambonin'ny tany, mahatohitra tsara ny hafanana, matanjaka mekanika, miorina tsara ny simika ary ny insulation elektrika, toetra tsy misy poizina. Izy io dia mety mifanaraka amin'ny fampiharana isan-karazany manampy ESD fitaovana vita ESD pp hollow ravin sosona pad, ampio UV fitaovana natao UV miaro pp mitafo lamba fisaka sosona pad ho an'ny ivelany ampiasaina.
Previous: pp hollow sosona pad
Manaraka: pp mpiambina hazo mihombo